French Dairy Board honors Middle East pastry chefs of the future in Dubai | Culinary Travel News
Ikhaya » IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko » Ibhodi yeDeri yaseFrance ihlonipha abapheki be-Middle East abapheki bexesha elizayo e-Dubai
Ibhodi yeDeri yaseFrance ihlonipha abapheki be-Middle East abapheki bexesha elizayo e-Dubai
Disemba 28, 2020
Ibhodi yeDeri yaseFrance kunye udibano lwaseyurophuBaphinde babonakalisa ukuzibophelela kwabo ekuxhaseni isizukulwana esilandelayo sabapheki e-Middle East ngokuququzelela ukhuphiswano lwe-Cream Spirit, olwalubone iJordanian, iSanad Jaber ithweswa isithsaba.
Olu khuphiswano, lubanjelwe kwiZiko laMazwe ngaMazwe lobuGcisa beNkcubeko (i-ICCA) eDubai, lwenza into ebalulekileyo yokuzibophelela kwe-CNIEL kuqeqesho, ukufundisa, kunye nokufundisa abanqwenela ukuba ngabapheki beekhekhe abancinci kwi-GCC. Njengenxalenye yephulo, babenethuba lokufunda komnye wabapheki abaphekiweyo behlabathi, uClaire Heitzler, owayekhusela umpheki odumileyo uAlain Ducasse.
Ngaphantsi kweliso lobuchwephesha likaChef Claire, kunye neengcali ezaziwayo zaseDubai, abazalwana bakaChef Wassim kunye no-Chef Omar Orfali, abapheki abancinci bacelwe umngeni wokuthatha ikhekhe lesiFrentshi, iSanta Honoré, kwaye yongeza i-twist yanamhlanje.
Bebonke abapheki abaphekiweyo be-11 abaphuma kumazwe kubandakanya i-UAE, iJordani, iMorocco, kunye ne-India bathathe inxaxheba kukhuphiswano. Ukujoyina iJaber 'kwitafile ephezulu' yayingu-Intissar El Soussi waseMorocco, kunye noSudhakshina Iyer waseIndiya.
U-Laurent Damiens, uMlawuli, u-CNIEL, uthe: "Ngaphandle kobunzima bonyaka ophelileyo, sizimisele ukubonelela abapheki abancinci kunye neengcali zexesha elizayo ithuba lokuzicel 'umngeni kwaye bafunde kwezinye zezona zinto zibalaseleyo kwishishini".
“Qho ngonyaka, sibethwa ngumoya yitalente evela kwingingqi, kwaye nakulo unyaka bekungekho mahluko. Ubuchule, incasa, kunye nokunikezelwa kwento esiyibonileyo kuye kwaba yinto engaqhelekanga, ”wongeze watsho.
Olu khuphiswano lwagwetywa ngu-Chef Claire Heitzler; Umpheki u-Mohamed Orfali, umseki we-Orfali Bros; Igalelo losasazo loluntu uSamantha Wood, umyili weFoodiva; Umphembeleli wokutya uHoman Asayo; Umlawuli wekhosi ye-ICCA uShanaaz Rajaas; kunye noLaurent Damiens.
Njengenxalenye yolu khuphiswano, bonke abapheki abanqwenela baphathwa kwimiboniso ngu-Chef Claire, owabonisa izakhono zakhe xa wayesenza iMont-Blanc, iklasikhi yamaFrench. Oku kwalandelwa siseshoni ye-Q & A apho bonke abapheki abakhuphisanayo babe nethuba lokufunda ngakumbi ku-Chef Claire kunye nabantakwabo Chef Wassim no-Omar Orfali.
Ukuqukumbela usuku, kwabanjwa ingxoxo ejikelezayo yokujonga ishishini le-pastry ngezihloko kubandakanya uzinzo, inkunkuma engafunekiyo, imvelaphi, kunye nomgangatho konke okuxoxwe ngexesha leseshoni.